विचार-ब्लग Archives - Page9of9- Saptakoshionline
यौन, नैतिकता र विवाह: नरबहादुर कार्की
छुच्चो भएर मैले भन्नै पर्छ ‘यौन र नैतीकता’ अनी ‘सेक्स र विवाह ‘ लाई जती बढी पाखण्डी र पौरानिक किसिमले सोचिन्छ त्यतिनै युवा युवतीलाई हामी जोखिममा परिरहेका हुने छौं । एउटा प्रसङ्गमा ओशोले भनेको सम्झिन्छु ”हरेक छत मुनि हरेक राती जे ज्ञात-कर्म मान्छे गर्छन्, त्यसबारे कुरा गर्न किन यति डर छ मान्छेलाई ?” लेखक “यौन तपाईंले रोक्न नसक्ने ‘शक्ति’ हो । त्यसको नियन्त्रणले कुण्ठा...
फूल रोज्ने की काँडा ? केही फरक सोच्ने कि ?
के फूलहरु सुन्दर हुन ? या तिनीहरुलाई हामीले सुन्दर बनाएका हौँ ? हामीले कैलै फूललाई काँडा भनेनौँ, किनकी यसले कैलै कसैलाई घोचेन, बिझाएन । त्यस्तै काँडालाई चाँहि हामीले फूल मान्नै सकेनौँ । किनकी काँडाले उसको बिझाउने धर्म छोडेन । हाम्रो जीवनमा पनि काँडाहरु बानी भए, सधैँ बिझाइरहने । हाम्रो बानीको रुपमा, सोचको रुपमा आदि इत्यादि । जिन्दगीको एउटा तितो सत्य, हाम्रो व्यवहारिकतामा हामीले फूलहरुलाई कैलै...
सोमबार, भाद्र ०५, २०७४
सडक सहज रुपमा गन्तव्य सम्म पुग्न सकियोस भनेर निर्माण गरिएको हुन्छ । सडकलाई व्यवस्थित वनाउन सडक नियमहरु पनि वनाइन्छ । सडक प्रयोगकर्ता र सडकको सुरक्षाका लागि निति नियमहरु वनाउने गरिन्छ तर कहिले कहँीको नियम सुरक्षाका लागि भन्दा पनि देखासिकीका रुपमा वनाउने गरिएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा काठमाडौंमा लागु गरिएको हर्न निषेधित नियम पुर्वको व्यस्त सहर इटहरी बजार क्षेत्रमा समेत लगाइएको छ । तर इटहरीमा लगाइए...
कृष्ण जुनेली इनरुवा । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएपछि राजन मेहताले नाटकमा अभियन गर्दै गरेको आफनो फोटो फेसबुकमा राखदै पहिलेका दिन स्मरण गरे । मेयर मेहताले २२ वर्ष अघिको नाटक खेल्दाको स्मरण गर्ने काम मात्र गरेनन नगरवासीलाई उनको सामाजिक कामको स्मरण समेत गराउने काम गर्याे सो पोष्टले । राजन मेहतालाई इनरुवाको मेयर बनाउन उनको नाट्य जीवन पनि सहयोगी बन्यो । इनरुवा तथा आसपासका क...
जिन्दगीले जिन्दगीसंग जिन्दगी मागिरहयो- बिशाल बिमर्श
जिन्दगीले जिन्दगीसंग जिन्दगी मागिरहयो अन्तिम सासले छोटो एक अबधि मागिरहयो केवल आवश्यकतामा याद गर्छन मान्छेहरु जस्तो अधेरी रातले मैनवत्ति मागिरहयो आमाले निस्वार्थ रुपमा प्रेम गरिरहिन छोरोले आमासंग सम्पति मागिरहयो तलामाथि छोरो रममा रमरम छ लम्पसार सिढिमुनि बाउ बिरामी ओखति मागिरहयो।
शनिबार, साउन ०७, २०७४
जनप्रतिनिधिहरुका काम कर्तब्य र अधिकार !
[दिपेन्द्र भट्टराई] शिकार खेल्न जानु गोली बिनाको बन्दुक बोकेर । अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अवस्था यस्तै देखिन्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले पदवहाली गरिसकेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई प्रसस्त अधिकार दिएपनि यी अधिकारहरु अहिले संविधानमा मात्र सिमित छन् । यी अधिकारहरुको कार्यन्वयनका लागि आवश्यक संघीय स्वरुपको स्थानीय तह संचाल सम्बन्धि ऐन, कानुन तथा नियमावली नहुँदा निवार्चित भएर पद समाल्...
आइतबार, साउन ०१, २०७४